धर्ती माताले फेरी गरिन नेपालको ड रलाग्दो भबिस्यवाणी – राजा, रबि र देश, २०७८ मा यति ठुला ख त राहरु आउदै छन्, बाढी पहिरो ? हेर्नुस के के ? – Sapana Sanjal
धर्ती माताले फेरी गरिन नेपालको ड रलाग्दो भबिस्यवाणी – राजा, रबि र देश, २०७८ मा यति ठुला ख त राहरु आउदै छन्, बाढी पहिरो ? हेर्नुस के के ?
July 9, 2021 185
Sapana Sanjal : काठमाडौँ । यतिबेला अहिले सबै नेपालमानै पानीले बि त न्डा म च्चा ए को छ कतै बाढी कतै पहिरो कतै यसैको असरले कामहरु ठप्प भएका छन् । यसै बिषयमा देशको जटिल अवस्था देखेर सबै चिन्तित पनि छन् ।
सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट हुने सबै कोशिसहरु गरिरहेकै छ। केहि समय देखि नै युटुब र सामाजिक संजालमा एकदमै भाइरल भएको नाम हो धर्ति माता उर्फ गुल्मीकी बिष्णु कुँवर । मानिस र देशकै भविष्यवाणी गर्दै युट्युव भिडियोहरुमार्फत भाइरल बन्दै आएकी धर्तीमाता गुल्मीकी विष्णु कुँवर हुन् ।
गुल्मीको ईस्मा गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष टीका रेश्मी उनको जन्म घर सोही वडा साविक हस्तीचौर गाविस–८ मा रहेको पालुखाको पनाह टोल रहेको बताउँछन् । अहिले फेरी विभिन्न जिल्लामा तीन महिना कठिन तपस्या गरेपछि ज्ञान पाएँ।
अहिले सफल भएकी छु। दिनमा मलाई भेट्न आउने भक्तजनको संख्या गनेर साध्य छैन।’ धर्ती माताले भनिन्। धर्ती माताले २०७९ सालसम्म नेपालमा विनास आउने दाबी पनि गरेकी छिन्। हेर्नुस तलको भिडियोमा
Prevमन्त्रालयको गाडीभित्र भक्तपुरमा एक युवक र युवती…….
Nextभगवान् गौतम बुद्धले दिएको ५ अनमोल वचनहरु अवस्य जान्नुहोस्
आज बिहिवार पनि बढ्यो सुनकाे भाउ, यस्ताे छ आजकाे भाउ
प्रेमीले नै ज्या’न लिएपछि….
जोलो टापु जाँदै गरेको ९२ यात्रु सवार विमान दुर्घटना, १५ जनाको उद्दार